10 ama-shampoos ama-2-in-1 amahle kakhulu nama-conditioners
[ad_1] Ingabe ungomunye walabo abahlala bebaleka ekuseni? Ngabe uyakuzonda ukulinda i-conditioner ukuthi ingene ngemuva kokugeza izinwele zakho? Uma kunjalo, ngenhlanhla yakho, kukhona amathani wemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ngaphandle lapho ehlanza futhi ibeke izinwele zakho ngasikhathi sinye. Wena… Qhubeka ukufunda 10 ama-shampoos ama-2-in-1 amahle kakhulu nama-conditioners
Kushicilelwe 15 September 2021
Kufakwe kusigaba njenge Beauty
Onobuhle bezinkanyezi abangu-10 ababuya ngemuva kokuzola
[ad_1] NSW Kungani u-Alison Porter anyamalala ezikrinini ngemuva kokuphumelela kukaCurly Sue, wenzani uSvetlana Loboda ngenkathi eshiya iqembu le-VIA GRA, futhi u-Andie MacDowell ukwazile kanjani “ukuphinda abambe” umlingisi aye kumodela? Onobuhle bezinkanyezi abangu-10 ababuyile ekuthandeni ngemuva kokuxega. USvetlana Loboda “Bonke abantu… Qhubeka ukufunda Onobuhle bezinkanyezi abangu-10 ababuya ngemuva kokuzola
Kushicilelwe 10 September 2021
Ama-serum ama-5 engizowathenga futhi
[ad_1] BNgiyabonga kule mikhiqizo, ngayeka ukucabanga ngesisekelo empilweni yansuku zonke, ngathatha ukunakekelwa okuphelele ebusuku (ngaphandle kwesikhumba esinamafutha ekuseni), ngikhohlwe ngokuxebuka futhi ngikwenze lula indlela yami yobuhle yansuku zonke ngangokunokwenzeka - uma ukwelashwa kwakho kuyiserum yobuso, konke okunye kuzolandela. Konke… Qhubeka ukufunda Ama-serum ama-5 engizowathenga futhi
ubukeka kanjani ukhilimu womama bethu manje?
[ad_1] Umkhiqizo weBAchromin ujwayelekile kuwo wonke umuntu owake waba nentshisekelo enkingeni yokukhanyisa isikhumba. Futhi uma ngokungazelelwe ungakaze uzwe ngaye, buza unyoko - uyazi impela. Ukhilimu kuphela wezindawo zeminyaka i-Achromin, ebisetshenziswa ngabesifazane e-USSR, ikhiqizwe yiBulgaria… Qhubeka ukufunda ubukeka kanjani ukhilimu womama bethu manje?
Abasubathi besifazane abahle kakhulu besikhathi sethu
[ad_1] Abavocavoci bomzimba abaziwayo bakwenza ngemuva kokuphela komsebenzi wabo wezemidlalo, futhi ngabe umdlali webhola webhola omuhle kakhulu eRussia ubukeka kanjani? Ingxenye yokugcina yendatshana emayelana namantombazane amahle kwezemidlalo. Owokuqala nowesibili bafunda izingxenye ezixhumanisweni. UMargarita Mamun UMargarita Mamun kasikhombisa waba ngumpetha womhlaba… Qhubeka ukufunda Abasubathi besifazane abahle kakhulu besikhathi sethu
Imikhiqizo yezinwele engu-5 ngiyithenga kaninginingi
[ad_1] NGAPHAMBI kwe-shampoo, i-shimmer styling spray, impande ye-volumizing mousse neminye imikhiqizo engiyisebenzisa ekugcineni. I-Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Shampoo yokwengeza ivolumu ezinweleni i-Extra Volume Shampoo kanye ne-smoothing conditioner I-Smoothing Conditioner, i-Moroccanoil Umkhiqizo wakwa-Israel iMoroccanoil ubulokhu ugcina izinwele zami zisoma futhi ziba buthuntu cishe iminyaka emithathu.… Qhubeka ukufunda Imikhiqizo yezinwele engu-5 ngiyithenga kaninginingi
Imibono engama-40 emhlophe ye-nail polish manicure
[ad_1] Imibono engama-40 emhlophe yokugcoba izinzipho [ad_2]
Izindima eziyi-8 ezinhle kakhulu zika-Angelina Jolie
[ad_1] V Ekuqaleni komsebenzi wakhe, owesifazane omuhle kunabo bonke emhlabeni, ngokusho kwephephabhuku iVanity Fair, esikhundleni sezingubo zetiye elimnyama, wayehamba amabhulukwe esikhumba kukhaphethi obomvu. Izindima kumabhayisikobho zazifanele: uGia - imodeli yemfashini ene-psyche engazinzile, uLara Croft omuhle ngolaka, ingane uKate… Qhubeka ukufunda Izindima eziyi-8 ezinhle kakhulu zika-Angelina Jolie
Izinketho ze-manicure ezingama-20 ezandisa izinzipho zakho
[ad_1] Izinketho ze-manicure ezingama-20 ezandisa izinzipho zakho [ad_2]
Amaqiniso ayi-10 obungawazi ngo-Elizabeth II
[ad_1] I-TOQueen yaseGreat Britain iyinkosi ebusa isikhathi eside kunazo zonke phakathi kwabaphilayo. NgoJulayi bekugujwa iminyaka engama-65 ethweswa umqhele. Ngalesi sikhathi, u-Elizabeth II ukwazile ukuphendula izinhlamvu eziyizigidi eziyi-3.5, wazi opapa abayisikhombisa futhi wahlanganisa iqoqo lezigqoko ezingama-5,000 XNUMX. Amaqiniso athakazelisa kakhulu ngendlovukazi ase… Qhubeka ukufunda Amaqiniso ayi-10 obungawazi ngo-Elizabeth II
Izinkanyezi ezingama-20 ezifaka izibuko kodwa wena ubungazi
[ad_1] D Kukhaphethi obomvu, bakhetha amalensi, futhi ngesikhathi sabo samahhala kusukela ekuqopheni ifilimu nasemicimbini yokuzijabulisa, bagqoka izibuko eziyalelwe ngudokotela. Ekukhetheni okukhethekile kweBeautifulHack kunezinkanyezi ezingakwesabi ukubizwa ngegama elithi "amehlo amane". Ngikholwe, uhlu luyoba nokuvelela kakhulu uma osaziwayo abaningi bengazange… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi ezingama-20 ezifaka izibuko kodwa wena ubungazi
Ima! Izitayela zezinwele eziyi-8 ezikhula kabi kabi
[ad_1] Yima! Izitayela zezinwele eziyi-8 ezikhula kabi [ad_2]
Imibukiso ye-TV yaseBrazil eyi-15 ephule amarekhodi ngokwababukeli
[ad_1] Kusuka “Ezigqilazweni Zika-Izaura” Kuya “Kwithemba LaseBrazil”! Ku-BeautyHack - uchungechunge oluhamba phambili lwe-TV yaseBrazil iminyaka engama-36, olwasakazwa eRussia. “I-Slave Izaura” Uchungechunge lwaqala ukukhonjiswa ngo-Okthoba 11, 1976. E-USSR, i- “Slave Izaura” yaboniswa ngo-1988 kuphela - kwaba umdlalo wokuqala owuchungechunge kuthelevishini yaseSoviet.… Qhubeka ukufunda Imibukiso ye-TV yaseBrazil eyi-15 ephule amarekhodi ngokwababukeli
Izitayela zezinwele eziyi-20 zezinwele ezinhle
[ad_1] UBeautyHack uqoqe ukukhethwa kwezinwele zosaziwayo eziphumelele ezizuze njengemicu emincane ngokwemvelo. Futhi ama-stylists kanye ne-trichologists batshele ukuthi zinganakekelwa kanjani izinwele ezinjalo nokuthi kusho ukuthini ukwenza isitayela. UVyacheslav Gordeev umlobi ophezulu weNikolskaya Club salon Salty Dog Cocktail Beach Spray, u-Evo uyangisiza ngiguqule izinwele ezincanyana zibe yi-voluminous… Qhubeka ukufunda Izitayela zezinwele eziyi-20 zezinwele ezinhle
Ama-powders ama-5 amahle kakhulu ngokusho kwabafundi be-BeautyHack
[ad_1] NEZIMALI ezivela kuma-ruble ayi-799 kuye kwangama-4,000, abafundi beBeautyHack asebenzise iminyaka eminingi! ICompact powder Prisme Visage, iGivenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme Kudlula iminyaka eminingana, iphakethe lePrisme Visage liyashintsha, futhi impuphu ihlala iyintandokazi yamantombazane amaningi. Ngizoqala ngokwakhiwa kwalokhu okuthengwa kakhulu emhlabeni wezimonyo zokuhlobisa.… Qhubeka ukufunda Ama-powders ama-5 amahle kakhulu ngokusho kwabafundi be-BeautyHack
Ukuya phambili kwesifuba: Izinkanyezi eziyi-8 ezine-Mammoplasty Ehlulekile
[ad_1] Ukuya phambili kwesifuba: Izinkanyezi eziyi-8 ezine-Mammoplasty Yehlulekile [ad_2]
Izinketho ezingu-15 ezinhle kakhulu ezivela ezinkanyezini
[ad_1] Imibono engu-15 evela kukhaphethi obomvu, efanele empilweni yangempela. Amathiphu omculi we-Makeup afakiwe! Izimonyo zikaHayley Bieber ezikhanyayo, ezifana nezikaHailey, zivuselela ngokushesha, zikwenze ulungele ibhizinisi eliqine kakhulu ngoMsombuluko. Umculi wezimonyo uKsenia Nikitina weluleka ukufaka isisekelo se-Urban Decay ngaphansi komthunzi. “Bagcina umthunzi uvikelekile amahora angama-24. Ngikhetha u-satin… Qhubeka ukufunda Izinketho ezingu-15 ezinhle kakhulu ezivela ezinkanyezini
I-Roman Moiseenko - cishe amaphutha wesitayela owenzayo
[ad_1] URoman Moiseenko ungomunye wabalungisa izinwele nabadwebi bezinwele abadume kakhulu eRussia. Usebenze kumaphrojekthi amakhulu afana ne "Star Factory", "People's Artist", wayengumbambisene wohlelo lwe- “Take It Off Rightly” ku-STS. URoman utshele uBeautyHack ukuthi ungazomisa kanjani kahle izinwele zakho, kungani udinga ukushintsha ukuhlukana nokuthi yini… Qhubeka ukufunda I-Roman Moiseenko - cishe amaphutha wesitayela owenzayo
ngenze kanjani ukuthi ngangigunda izinwele futhi ngaziphunga e-Art'Up salon
[ad_1] U-Gthe heroine we-BeautyHack project uKatyya uchithe amahora amaningi eSalon Art'Up ePondriarch's Ponds, lapho athola khona izinwele ezintsha futhi engajwayelekile, emizweni yakhe, ukwakheka. U-Stylist u-Eldar Adraev nomqondisi wezobuciko we-Art'Up umculi wezimonyo u-Alena Lapina bakhuluma ngokuhlolwa kwabo. Ngaphambi kuka-Eldar Adraev umlobi ophezulu wobuhle be-Art'Up… Qhubeka ukufunda ngenze kanjani ukuthi ngangigunda izinwele futhi ngaziphunga e-Art'Up salon
Ithiphu ye-BeautyHack Yesonto: Thatha Bath Bath
[ad_1] HDo ungasigodli isikhathi senjabulo enjalo (ikakhulukazi kubahlali bedolobha elikhulu)! Uma ubanda, ukhathele, uxinekile ekucindezelekeni, zwa ukuthi isikhumba sesomile futhi sinamahloni, sisebenza ngokweqile ekuqeqesheni - geza usebenzise usawoti owuthandayo. Kusuka kochwepheshe kwa-BeautyHack - izinketho eziyisithupha eziqinisekisiwe. Okokuqala,… Qhubeka ukufunda Ithiphu ye-BeautyHack Yesonto: Thatha Bath Bath
idrayivu yokuhlola yenqubo yokwakheka komzimba engenabuhlungu
[ad_1] Umhleli Omkhulu we-GBeautyHack uKarina Andreeva waya endaweni yokucwala izinwele ethi "Millefeuille» EFrunzenskaya, wahlola inkambo yezinqubo zomzimba eziyishumi kuzinto zase-Italy Icoon Laser futhi wabelana ngokuvela kwakhe. Ngeke ngiqambe amanga uma ngithi cishe wonke umuntu wesifazane namuhla uphupha ngomzimba onamathoni nesikhumba esinempilo. Othile unenhlanhla ngezakhi zofuzo,… Qhubeka ukufunda idrayivu yokuhlola yenqubo yokwakheka komzimba engenabuhlungu
Khulisa ngokushesha! Izinkanyezi eziyi-10 ezingahambi
[ad_1] Isihlahla se-Ha asikwazi ukubuyekeza kuphela ukugunda izinwele okubandayo, kodwa futhi sishintsha ngokubukeka ubukhulu bobuso. Futhi uma esimweni sokuqala kunamathuba ambalwa okwehluleka, kowesibili konke kuyinkimbinkimbi kakhulu. Isibonelo, ama-bangs aqondile ngeke ahambisane nabesifazane abanobuso besikwele, amafushane azo… Qhubeka ukufunda Khulisa ngokushesha! Izinkanyezi eziyi-10 ezingahambi
Izitayela zezinwele eziyi-33 zokunquma ngaphambi kuka-33
[ad_1] Ukugunda izinwele okugoqekayo, ama-bangs, ama-mohawks, ama-braids wesibhakela nama-ponytails - yini ongakazami okwamanje? Ungakwenza kuphi: I-HAIRDRYER Dry Bar (iBolshaya Dmitrovka, 16/1, wonke amakheli angabukwa lapha) Intengo ngokufakwa ngakunye: Ama-ruble ayi-1 400. (ukwelukwa), ama-ruble ayi-2,000 3,500. (nsuku zonke), ama-ruble angu-16 XNUMX. ("UBoogie Woogie"). Indawo yokuphehla nebuhle (iBolshaya Dmitrovka, XNUMX; Malaya Bronnaya,… Qhubeka ukufunda Izitayela zezinwele eziyi-33 zokunquma ngaphambi kuka-33
Uyabona? Avuthwe kanjani amaqhawekazi ochungechunge lwehlelo le-TV
[ad_1] UHit uqhamuke kuLuisana Lopilato oqhamuka kwiRebel Spirit futhi kuluphi uchungechunge lwe-TV uClaire Danes alingisa eceleni kukaJared Leto? UBeautyHack wembula okwenziwa yintsha edumile yama-90s nama-2000s manje. UMischa Barton (Marissa Cooper ochungechungeni lwe-TV oluthi “OS - Lonely Hearts”) Isiqephu sokuqala sochungechunge oludumile sikhishwe… Qhubeka ukufunda Uyabona? Avuthwe kanjani amaqhawekazi ochungechunge lwehlelo le-TV
6 imikhiqizo ephelele yethoni engiyithenga kaninginingi
[ad_1] I-RAre ikhulisiwe ama-pores, ubomvu, imibuthano ngaphansi kwamehlo - izinkinga ezijwayelekile? Kuthatha umzamo omkhulu nemali ukudala ithoni ephelele. Ngikhuluma ngezintandokazi zami esigabeni "Kuze kube ukwehla kokugcina." I-Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Ilungisa ukhilimu wobuso u-CC Red, u-Erborian Uguquko oluyisimangaliso kusuka kokuluhlaza kuya ku-beige ngu… Qhubeka ukufunda 6 imikhiqizo ephelele yethoni engiyithenga kaninginingi
Osaziwayo abangu-15 abanamashiya amahle
[ad_1] NSUkumiswa kahle kwamashiya akugcini ngokwenza ukubukeka kuvuleke ngokwengeziwe, kodwa futhi kwakha izilinganiso ezifanele zobuso. Kulokhu, abadwebi bezimonyo abahamba phambili emhlabeni bayeluleka ngokulandela imfashini. Naphezu kweqiniso lokuthi amashiya abanzi, angenamithi ngeke "ashiye" ama-catwalks omhlaba, leli fomu… Qhubeka ukufunda Osaziwayo abangu-15 abanamashiya amahle
10 Ama-tattoo ka-Angelina Jolie okufanele wazi ngawo
[ad_1] MHave unezingane eziyisithupha kanye neNxusa Lomusa u-Angelina Jolie ungumthandi wamathambo. I-hieroglyph ethi "ukufa" ibe ngeyokuqala ukuvela emzimbeni womlingisi. Ngemuva kweminyaka embalwa, u-Angie wayisusa, wayifaka i-tattoo yamaBuddha ethi "UTai uthandazela ukuvikelwa." Bonke “ubuciko” emzimbeni wenkanyezi buno… Qhubeka ukufunda 10 Ama-tattoo ka-Angelina Jolie okufanele wazi ngawo
yini izinkanyezi ezilungele ukwenza umsebenzi?
[ad_1] V uneminyaka emingaki uBella Hadid athola i-rhinoplasty yakhe yokuqala, futhi yisiphi isimo uKylie Jenner aletha ukubukeka kwakhe okusha? Ngenxa yezindima ezintsha, izinkontileka namaphrojekthi webhizinisi, izinkanyezi zikulungele ukujova okungenangozi kweBotox nokuhlinzwa okunamandla kwepulasitiki. UCher Cher uneminyaka engama-72, kanti uhhafu walokhu… Qhubeka ukufunda yini izinkanyezi ezilungele ukwenza umsebenzi?
Ngubani ongahambi nezinwele ezimfishane
[ad_1] Zdid ufuna ukuvuselela isithombe noma ushintshe isithombe? Thatha isikhathi sakho ukwenza izinqumo ezinqala - izinguquko ekugundeni izinwele azihlali zihlangabezana nokulindelwe. Uma unesifiso sokugunda izinwele ezimfushane, qala unqume ukuthi ngabe lobu bude bukufanele yini. I-BeautyHack imayelana nokuthi ngubani ongazithandi izinwele ezimfushane.… Qhubeka ukufunda Ngubani ongahambi nezinwele ezimfishane
Awukwazi ukukhohlwa ukuthenga? Imikhiqizo engu-10 eshisayo ephezulu yesonto
[ad_1] Idivayisi yokusetshenziswa kwabalandeli, amanzi ezimbali ebusweni, amachashazi - abagcini bomswakama nezinye izinto ezintsha zaleli sonto okufanele uzinake. IMassager yokulwa nemibimbi iMassage Wrinkle Remover, iMIZUHI Iyasebenza, ilula, isabelomali - lokhu kumayelana namagajethi amasha wobuhle aseJapan iMIZUHI, angathengwa muva nje eL'Etoile. Sikhulume ngayo… Qhubeka ukufunda Awukwazi ukukhohlwa ukuthenga? Imikhiqizo engu-10 eshisayo ephezulu yesonto
UPolina Gagarina nezinye izinkanyezi zaseRussia ezilahlekelwe isisindo esiningi
[ad_1] WITHport, ukudla okufanele noma ukudla okuqinile - yini esize uPolina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova nezinye izinkanyezi ukuthi babe sesimweni esifanele? UPolina Gagarina E "Star Factory" UPolina wayengabukeki njengamanje. Futhi iphuzu akukhona ukuthi ngaleso sikhathi wayengenayo izinwele ezisayinwe kanye ne-platinum blonde.… Qhubeka ukufunda UPolina Gagarina nezinye izinkanyezi zaseRussia ezilahlekelwe isisindo esiningi
Ama-hacks ama-18 wobuhle avela ku-trichologist no-stylist
[ad_1] Isazi setriki esidumile u-Tamara Berechikidze no-stylist u-Alexei Nagorskiy bakhuluma ngokuthi ungazinakekela kanjani izinwele zakho, isitayela sincane futhi asinalo ivolumu, imicu esindayo ejiyile noma ende ende. Izinwele ezinde ezijiyile uTamara Berechikidze Oqokelwe Ukufundela Isayensi Yezokwelapha, udokotela wesikhumba-i-cosmetologist, i-trichologist 1) Uma unezinwele ezinde nezisindayo, khetha ikama lokhuni elinekamu elihle… Qhubeka ukufunda Ama-hacks ama-18 wobuhle avela ku-trichologist no-stylist
Ungasithuthukisa kanjani isikhumba? Isazi sezimonyo siyeluleka
[ad_1] U-TAsya Al-Arabi, isazi samazwe ngamazwe se-cosmetologist we-DIBI Milano eRussia, utshele ukuthi ungasinakekela kanjani kahle isikhumba, siyini isithiyo se-epidermal nokuthi kungenzeka yini ukuthuthukisa ukusebenza kokhilimu. U-Asya Al-Arabi Trainer-cosmetologist wesigaba samazwe omhlaba i-DIBI Milano eRussia Sitshele ngokunakekelwa kwesikhumba okufanele: ukuthi ungakhetha kanjani… Qhubeka ukufunda Ungasithuthukisa kanjani isikhumba? Isazi sezimonyo siyeluleka
Ungayikhulisa kanjani izindebe ngezimonyo: amathiphu avela kubaculi bezimonyo
[ad_1] YINI izingxenye ezisekucwebezeleni kwezindebe, indlela yokwenza umphumela we-ombre, nokuthi ungawudweba kanjani kahle umugqa ngepensela? Khuhla izindebe zakho bese ufaka izithunzi eziningi zezindebe zomlomo uLisa Eldridge Sebenzisa umuthi wezindebe ngaphambi kokuqala ukwakheka. I-Kiko's Scrub & Peel Wipes ayisusi kuphela izinhlayiya zesikhumba ezifile,… Qhubeka ukufunda Ungayikhulisa kanjani izindebe ngezimonyo: amathiphu avela kubaculi bezimonyo
amaski amahle kakhulu anezithelo zezithelo
[ad_1] I-NSapaya, ikhabe, isitrobheli, i-apula kanye nokwatapheya akuyona iresiphi yesmoothie enempilo futhi hhayi izithako zesaladi lezithelo, kepha ngabasizi bezobuhle bangempela kulabo isikhumba sabo esidinga ukuvuselelwa kwe-sos kanye ne-hydration. Abahleli be-BeautyHack bahlole amaski amahle kakhulu ngezithelo zezithelo futhi bakhipha isinqumo sabo. Ukulinganisa imaski nezithelo ezikhishwe Izithelo Ukulinganisela… Qhubeka ukufunda amaski amahle kakhulu anezithelo zezithelo
Isitayela esiseceleni: 15 izibonelo zezinkanyezi ezihamba phambili
[ad_1] TOTp umnyovu ohlukanisayo uyakwazi ukwenza cishe noma iyiphi indlela yokugunda izinwele ihambisane, futhi kubanikazi bezinwele ezincanyana akunakubuyiselwa ndawo. Nazi izibonelo ezinhle kakhulu zezinwele ezihlukaniswe uhlangothi nokuthi ungaziphinda kanjani futhi ugweme amaphutha. I-Wavy bob Ukuhlukana ohlangothini ngokuhlangana nama-curls obude obuphakathi akuvumeli ukushaya kuphela ... Qhubeka ukufunda Isitayela esiseceleni: 15 izibonelo zezinkanyezi ezihamba phambili
Ukwenza izimonyo - ungakuphinda kanjani
[ad_1] I-Vizagist uChristina Novikova - mayelana nokuthi ungakwenza kanjani (nokuthi kufanele yini) ukubhaka wena nokuthi yimiphi imikhiqizo efanelekile ukwenziwa okunjalo. UChristina Novikova visagiste Kuyini ukubhaka? Ukubhaka, okokuqala, ukwakheka esiteji, okusetshenziswa kumafilimu, kumatiyetha nakukhaphethi obomvu. Ukwakheka okunjalo kuthandwa yi… Qhubeka ukufunda Ukwenza izimonyo - ungakuphinda kanjani
Ungaphindi! Izitayela zezinwele zosaziwayo ezingama-25 zaso sonke isikhathi
[ad_1] U-DJennifer Lopez wafika kuma-Oscars ka-2002 ephethe isigubhu, kanti uKristen Stewart wayevame ukucasula abathwebuli kanye nabagxeki ngezinwele zakhe ezihlekisayo. I-BeautyHack ibe nobumnandi obuningi ngokuxoxa ngokuhluleka kwezinkanyezi no-stylist ophezulu u-Ivan Anisimov. U-Ivan Anisimov ophambili wesitayela sezithombe I-Embassy Yesitayela UJennifer Lopez Ekuqaleni bengicabanga ukuthi isithombe… Qhubeka ukufunda Ungaphindi! Izitayela zezinwele zosaziwayo ezingama-25 zaso sonke isikhathi
Ubuhle obuyishumi obuyinhloko obuvela ochungechungeni lwe-TV
[ad_1] U-TOovarious Maiza ovela ochungechungeni lwe-TV oluthi “Clone”, u-Esmeralda onguzenzisi ovela “e-Dream Coast” kanye nezindima eziyi-8 ezingakhohlwayo zabakhohlakele. UDaniela Escobar (Maiza). Uchungechunge oluthi "Clone" Indima kaMaiza ocashile futhi ongajabuli neze ngumsebenzi wokuqala omkhulu womlingisi owaqala ngaleso sikhathi uDaniela Escobar. Umlingisi kuvele ukuthi ubengacaci kahle:… Qhubeka ukufunda Ubuhle obuyishumi obuyinhloko obuvela ochungechungeni lwe-TV
Seshintshe kanjani abalingisi beCruel Intentions
[ad_1] eminyakeni engamashumi amabili edlule, ngoMashi 5, 1999, kukhishwe ifilimu yesine futhi ethandwa kakhulu kunoveli ethi "Dangerous Liaisons" kaChoderlos de Laclos yakhishwa. Lesi senzo sisuke ngekhulu le-18 saya kwelama-20, futhi esikhundleni seFrance, kwavela izikrini ezinhle eNew York. Ngenkathi uhlela ukuphinda ubuke i-Cruel Intentions, i-BeautyHack… Qhubeka ukufunda Seshintshe kanjani abalingisi beCruel Intentions
Ungasinakekela kanjani isikhumba sakho entwasahlobo: iseluleko esivela kudokotela wesikhumba
[ad_1] Ukunakekelwa okuphelele nokusetshenziswa kwemikhiqizo ehlaba umxhwele ngenkathi ebandayo akuqinisekisi ukuthi isikhumba sizobukeka singenasici ngokuqala kwemfudumalo. Yiziphi izimfihlo zobuhle ezizosiza ekunakekeleni izinhlobo ezahlukene zesikhumba nokuthi ungawukhetha kanjani umkhiqizo ophelele? Izimpendulo zale mibuzo sezivele zitholakele… Qhubeka ukufunda Ungasinakekela kanjani isikhumba sakho entwasahlobo: iseluleko esivela kudokotela wesikhumba
Izinkanyezi ezingama-20 ezingazwani
[ad_1] WITHShackles, amacebo, uphenyo eHollywood akuvamile. Ukukhethwa kwe-BeautyHack kufaka phakathi izinkanyezi ezingama-20 okungenzeki ukuthi zithole ulimi olufanayo. UMadonna vs. Gwyneth Paltrow Umlingisi ophumelele u-Oscar kanye nendlovukazi ye-pop kuvame ukukhulunywa ngaye njengabangani abafungile. UMadonna noGwyneth babenobudlelwano obufudumele isikhathi eside, baze babiza no… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi ezingama-20 ezingazwani
Ama-memes angama-30 amahle kunawo wonke
[ad_1] ama-meme amahle angu-30 [ad_2]
Abafazi abangu-10 abahle kakhulu bakaMongameli besikhathi sonke
[ad_1] Kusuka kubantu besifazane baseFrance uBrigitte Macron kuya kwizintokazi zokuqala zase-Azerbaijan naseCote d'Ivoire. UMelania trump Okokugcina engxoxweni engekho esimweni senkosikazi yokuqala, uMelania wanikeza ngo-2016 kwi-American GQ. Ngemuva kwalokho inkanyezi ngendlela yezwe yabelana ngezindaba ezivela empilweni futhi "yazama" indima ye… Qhubeka ukufunda Abafazi abangu-10 abahle kakhulu bakaMongameli besikhathi sonke
Izisekelo ezi-5 ezinhle zesikhumba esomile
[ad_1] Isixazululo se-on-line esuselwa emanzini e-lotus flower, ukhilimu we-BB onomphumela omuhle wokunakekelwa nokunye okutholakele kwesikhumba esomile - ku-athikili entsha ngumhleli-omkhulu we-BeautyHack Karina Andreeva @ kandreevaa… UKarina Andreeva Chief Umhleli we-BeautyHack Nginesikhumba esithanda ukoma, ngakho-ke ngiya ekukhetheni isisekelo… Qhubeka ukufunda Izisekelo ezi-5 ezinhle zesikhumba esomile
Amashiya Fairy: indlela yokwenza umumo uphelele
[ad_1] Umculi wobuhle we-Vand uKelly Baker ubesebenza eHollywood iminyaka engu-17, lapho intombazane ibizwa kufanele "inganekwane yamashiya." Uhlu lwamakhasimende akhe lubandakanya wonke umndeni wakwaKardashian-Jenner, uShay Mitchell, uCardi B, uZendaya, u-Ariana Grande, abalingisi beGame of Thrones nezinye izinkanyezi eziyishumi nambili. Impilo ka-V Instagram Kelly… Qhubeka ukufunda Amashiya Fairy: indlela yokwenza umumo uphelele
Hewu! Ngabe namhlanje ubukeka kanjani umdlali odlala izingane ochungechungeni lwe-TV yaseBrazil?
[ad_1] V Ngawo-1990, umdlalo wokuzilibazisa omusha wavela empilweni yomndeni "wasemva kweSoviet" - ubuka uchungechunge lwe-TV. Kulezo zikhathi ezingekude kangako, ama-disk ayengafinyeleleki - ukuthola ukuthi i-telenovela izophela kanjani, njalo kusihlwa kwakudingeka ubeke konke bese uhlala esikrinini. Amaqhawe e… Qhubeka ukufunda Hewu! Ngabe namhlanje ubukeka kanjani umdlali odlala izingane ochungechungeni lwe-TV yaseBrazil?
ngayihlola kanjani i-Achromin amasonto amabili
[ad_1] NSRKhumbula ukhilimu odume ngokumhlophe opakisheni opinki noboye, ongabonakala endlini yangasese yanoma iyiphi indlu yaseSoviet neyaseSoviet? Kusukela lapho, lo mkhiqizo usuzithuthukisile izingoma zawo, waqanjwa kabusha futhi wavela emashalofini ezitolo kunguqulo ebuyekeziwe (ngaphakathi nangaphandle). Umhleli we-BeautyHack u-Yulia Kozoliy uyeke eyejwayelekile… Qhubeka ukufunda ngayihlola kanjani i-Achromin amasonto amabili
izinkanyezi zasihlekisa kanjani ngo-Ephreli 1?
[ad_1] Kusukela ekukhulelweni ngaphambi kwesehlukaniso: i-BeautyHack - mayelana namahlaya ayizinkanyezi izolo, lapho sicishe sakholwa khona. UJustin Bieber Izolo lezi zithandani zakwaBieber zihlanganyele izindaba ezimnandi - uHaley ulindele ingane. Njengobufakazi, uJustin ufake isikena se-ultrasound ngombungu: othile wagijimela ukuyohalalisela lo mbhangqwana, abanye bangabaza - lokho kwaba usizo kanjani… Qhubeka ukufunda izinkanyezi zasihlekisa kanjani ngo-Ephreli 1?
8 UMiss World onesiphetho esithakazelisayo
[ad_1] 8 uMiss World onesiphetho esimnandi [ad_2]
Amaphutha we-6 wesitayela owenzayo
[ad_1] Ukuhlukunyezwa kwemikhiqizo yezitayela kungaholela kuphi, nokuthi ungakhetha kanjani ikama elifanele lesitayela nokuthi kungani izinwele zidinga ukuvunyelwa zipholile? Isazi Sikazwelonke se-WELLA u-Igor Kimyashov - mayelana namaphutha ajwayelekile kakhulu owenzayo lapho uthayela izinwele zakho. Igor Kimyashov Isazi sikazwelonke WELLA Mistake # 1:… Qhubeka ukufunda Amaphutha we-6 wesitayela owenzayo
Izinkanyezi eziyi-10 ezaduma zisengumntwana
[ad_1] V Iyiphi ifilimu eyadlalwa ngu-Angelina Jolie eneminyaka engu-6, uDrew Barrymore wayithola kanjani indima yakhe yokuqala eneminyaka eyizinyanga eziyi-11 futhi iyiphi ifilimu edumile ongabona kuyo u-Elijah Wood omncane? Ekukhetheni okukhethekile kwe-BeautyHack, kunezinkanyezi ezavela kumabonakude e-TV zisencane.… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi eziyi-10 ezaduma zisengumntwana
Ayikho inkinga? Imibhangqwana engu-10 enhle kakhulu enomehluko omkhulu weminyaka
[ad_1] R Umehluko eminyakeni eyi-10, engama-20 ngisho nasekota yekhulu leminyaka awuzihluphi lezi zinkanyezi - zifakazela ngesibonelo sazo ukuthi azikho izithiyo zothando lweqiniso. Ku-BeautyHack kunemibhangqwana yezinkanyezi eyishumi enhle kunazo zonke iminyaka okungesiyona isithiyo kubo. UNick Jonas noPriyanka Chopra… Qhubeka ukufunda Ayikho inkinga? Imibhangqwana engu-10 enhle kakhulu enomehluko omkhulu weminyaka
ukuthi sifike kanjani kwenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokususa izinwele
[ad_1] I-NSWinter, i-laser, i-ultrasonic, isithombe-, i-electro-… Ekhulwini lama-21, igama elithi “epilation” linezinhlobonhlobo eziningi, futhi sinezindlela ezahlukahlukene zokususa izinwele. Manje kungenziwa ngisho nasekhaya, futhi ngaphandle kobuhlungu, ukusabela kwesikhumba nezinye izinkinga, futhi okubaluleke kakhulu: iphupho lawo wonke amantombazane - ukuqeda… Qhubeka ukufunda ukuthi sifike kanjani kwenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokususa izinwele
Izinkanyezi eziyi-10 ezihlomule ngokuhlinzwa ngepulasitiki
[ad_1] U-Bella Hadid, Megan Fox noBlake Lovely abakaze bamemezele esidlangalaleni ukuhlinzwa kwepulasitiki. Kodwa kuyaziwa ukuthi imisebenzi yamantombazane ikhuphuke umqansa ngemuva kwezinguquko ezinkulu ekubukekeni. Ngubani omunye okufanele athi "ngiyabonga" kodokotela abahlinzayo bepulasitiki - ezintweni ezibonakalayo ze-BeautyHack! UMegan Fox Megan Fox uphika noma ikuphi ukuhlinzwa kwepulasitiki nokunye… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi eziyi-10 ezihlomule ngokuhlinzwa ngepulasitiki
UMaria Ginzburg noRasida Lakoba - mayelana nephrojekthi entsha iThe-Face-Only
[ad_1] NSW Kungani uqala ukuvakashela i-beautician kepha ungasitholi isikhathi? Noma uyabesaba odokotela abasebenza ngamajazi nemijovo? Hlanganisa ukwesaba kwakho: iphrojekthi entsha I-the-face-only eyenzelwe wena kuphela - labo abafuna ukunakekela isikhumba sabo futhi bonge isikhathi sabo. Ifomethi ye-pop-up ayisho ukuthi izinqubo ezihlukumezayo noma… Qhubeka ukufunda UMaria Ginzburg noRasida Lakoba - mayelana nephrojekthi entsha iThe-Face-Only
Izitayela ezi-5 zobuhle ezivela eMoscow Fashion Week esizithandayo
[ad_1] IMercedes-Benz Fashion Week iRussia imvamisa ilandela amasonto emfashini abalulekile eNew York, eLondon, eMilan naseParis. Kulo nyaka, abaklami uYulia no-Alisa Ruban, u-Alena Akhmadullina, no-Alexander Arutyunov bahambele lo mcimbi wemfashini. Sikhombe imikhuba emihle yezwe, eguqulwe kahle emigwaqeni yaseMoscow. Umphumela wezinwele ezimanzi Omunye we… Qhubeka ukufunda Izitayela ezi-5 zobuhle ezivela eMoscow Fashion Week esizithandayo
kwenzekani kubahlanganyeli bemibukiso yokuqala engokoqobo yaseRussia
[ad_1] V Ekuqaleni kweminyaka yama-2000, ifomethi entsha yavela kuthelevishini yaseRussia - umbukiso ongokoqobo. Njalo, izigidi zababukeli be-TV zilahle yonke into ngenxa yomagazini omusha we- "Behind the Glass" noma i- "The Last Hero". Kwenzekeni kuzinkanyezi zesikrini se-TV, ezakhe uthando ku… Qhubeka ukufunda kwenzekani kubahlanganyeli bemibukiso yokuqala engokoqobo yaseRussia
[ad_1] I-rum yokuzijabulisa, uwoyela wokuhamba, isifutho semilenze ekhathele nokuningi eqoqweni lemikhiqizo emisha yaleli sonto. Uwoyela wezinwele waseTahiti Monoi, u-Alan Hadash Uphawu lwe-Alan Khadash, oluhlanganisa amasiko akwa-Israyeli nobuchwepheshe besimanje baseJalimane, lwavela eRussia kungekudala, ngakho-ke sifuna ukukukhumbuza ngokuqoqwa kwe… Qhubeka ukufunda Awukwazi ukukhohlwa ukuthenga? Imikhiqizo engu-10 eshisayo ephezulu yesonto
Ukukhethwa Kwabahleli: Ama-Top 10 Mists & Sprays ebusweni
[ad_1] I-Vesna! Lokhu kusho ukuthi isikhathi semidwebo enesibindi nesindayo siphelile. Izifutho nenkungu yomoya ngokulandelayo kulayini. Abahleli beBeautyHack bahlole “abangani abakhulu” besikhumba se-hydrated. I-lotion ethambisa iGlacial Spray Lotion, iSkyn Iceland Ihlolwe ngumhleli omkhulu u-BeautyHack Anastasia Speranskaya Ukunakwa, ukunakwa, izakhamizi zase megalopolises (hhayi kuphela)! Uthole i-… Qhubeka ukufunda Ukukhethwa Kwabahleli: Ama-Top 10 Mists & Sprays ebusweni
Ukukhetha Kwezinkanyezi: Amakha aphezulu ayi-12 aphezulu
[ad_1] UHatalya Vodianova, u-Angelica Timanina, uMaria Ivakova nezinye izinkanyezi - ngamakha asebekade bethandana nawo iminyaka eminingi! Ukukhethwa komethuli we-TV uMaria Ivakova: I-Portrait Of A Lady, uFrederic Malle Ngibheka isithombe esifudumele se-Portrait Of A Lady sikaFrederic Malle njengephunga lami lesiginesha - ngine… Qhubeka ukufunda Ukukhetha Kwezinkanyezi: Amakha aphezulu ayi-12 aphezulu
Izingcaphuno ezimnandi kakhulu ochungechungeni lwe-TV yenkolo yama-90s
[ad_1] V Ngasekuqaleni kweminyaka yama-90s, ukubuka izinhlelo ze-TV kusihlwa empeleni kwakuyisiko kuyo yonke imindeni. Abanye babo baphoqeleka ukuthi bakhale futhi bazwelane namaqhawe, kanti abanye bahleke, bathola "isabelo" sama-endorphin egazini. Futhi njengoba ukuhleka kwandisa impilo, i-BeautyHack ihlanganise izingcaphuno ezinhle kakhulu ku… Qhubeka ukufunda Izingcaphuno ezimnandi kakhulu ochungechungeni lwe-TV yenkolo yama-90s
Imibono eyi-12 ye-manicure emthunzini omkhulu we-2019
[ad_1] I-TOOral Living Coral enezinombolo eziyi-16-1546 iwumbala oyinhloko wezi-2019 ngokusho kwePantone Colour Institute. Ngemuva kokuqukethwe mayelana nemikhiqizo yobuhle emthunzini wethemba ogqamile, sishicilela izinketho ze-manicure nama-salon, lapho kungaphindwa khona kalula! Ungakwenza kuphi: Isaluni yohlobo lobuhle Uhlobo lwendawo yobuhleIkheli: IMoscow, iSmolensky yokuqala nge.,… Qhubeka ukufunda Imibono eyi-12 ye-manicure emthunzini omkhulu we-2019
Izindlela ezi-7 zokwakheka komshado zabashadikazi ngo-2019
[ad_1] Umculi wezimonyo ozimele u-Yulia Kupriy (@kupryimakeup) utshele ukuthi imiphi imicibisholo efanelekile kule sizini yomshado, kungani wonke umakoti kufanele abe nesicwebezelisi somlomo nesiphinki esikhwameni sakhe. UJulia Kupriy Umculi wezimonyo ozimele “Kakade namuhla, omakoti besikhathi esizayo babheka omagazini befuna ukwakheka kwabo okuhle komshado. I-pastel shades nemidwebo ye-matte… Qhubeka ukufunda Izindlela ezi-7 zokwakheka komshado zabashadikazi ngo-2019
Kwenzekani kubo? Ukwehla nokwehla kwabalingisi baseBrazil
[ad_1] Ama-TV angama-90 ama-TV aseBrazil ayesezingeni lokuthandwa kwawo. Labo abebengenandaba nalokho okwenziwa ngabalingisi abadumile iminyaka eyi-15 bazojabula: bangena kwizivumelwano zokukhangisa zezigidi eziningi, banezingane futhi bayaqhubeka nokudlala. Kunezinkanyezi eziyisishiyagalolunye zethelevishini ezinokuphila okuthakazelisa kakhulu kwi-BeautyHack.… Qhubeka ukufunda Kwenzekani kubo? Ukwehla nokwehla kwabalingisi baseBrazil
Amamodeli ayi-6 ashelfini aguqule imboni
[ad_1] I-EU akuyona indlela kuphela yokugqama embonini yezemfashini. Kunezibonelo lapho, uma ufika esembozweni se-American Vogue, amamodeli asuka phansi enezinkinga ezinkulu njengobuhlanga. Cishe amantombazane ayisithupha anesibindi anokubukeka okungavamile - ezintweni ezibonakalayo ze-BeautyHack. UBeverly Johnson Beverly ungomunye… Qhubeka ukufunda Amamodeli ayi-6 ashelfini aguqule imboni
Amakha ayizintandokazi ezi-5 omzimba nezinwele entwasahlobo
[ad_1] I-VSpring eMoscow yehluke ngokuphelele futhi ayilindelekile: kungaba ngokufudumala okungazelelwe okungenani okungu-10, isimo sezulu esifudumele (esishisayo ngisho nakwijakhethi yesikhumba) nelanga elikhanyayo, noma ngeqhwa elibukhali nokususa ku-thermometer ngosuku olulandelayo. Ukuze imizwa yakho ingagxumi, njengesimo sezulu,… Qhubeka ukufunda Amakha ayizintandokazi ezi-5 omzimba nezinwele entwasahlobo
Izinkanyezi eziyi-10 ezishintshe izibalo zazo ngaphezu kokuqashelwa
[ad_1] INDLELA uJessica Simpson ayilahla ngayo i-30 kg, yini imfihlo yokuvumelana kukaVictoria Lopyreva futhi yini esize uPolina Gagarina ukunciphisa umzimba? Osaziwayo abashintshe izibalo zabo ngaphezu kokuqashelwa baseqoqweni i-BeautyHack. Ukuphakama kukaJessica Cypson Jessica kungama-161 cm, isisindo esijwayelekile singama-55 kg. USimpson ujwayele ukukhuluphala futhi wazuza… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi eziyi-10 ezishintshe izibalo zazo ngaphezu kokuqashelwa
Ngokucophelela! Izitayela zezinwele ezingama-22 ezonakalisa izinwele zakho
[ad_1] Yiziphi izitayela zezinwele nezitayela okungafanele zenziwe nsuku zonke? Ukubhekana nama-stylists. U-Artak Hayrapetyan, umlobi wezitayela e-Beauty Stop26: 1. Ama-Combs Umgomo wokukama wukuthambisa ngamabomu izinwele zomsindo. Kepha ngenxa yalokhu, ukwakheka kobuso bezinwele kuyaphazamiseka nje: izikali zehlukanisiwe, njengoba… Qhubeka ukufunda Ngokucophelela! Izitayela zezinwele ezingama-22 ezonakalisa izinwele zakho
Izinkanyezi ezingama-20 ezingalokothi zibe nokuhluleka kobuhle
[ad_1] Yimiphi imikhiqizo izinkanyezi eziyisebenzisela ukwenza isitayela esifanelekile nokuthi ungaziphinda kanjani izimonyo zikaNatasha Poly kukhaphethi obomvu? Ingxenye yesibili yolwazi imayelana namantombazane angenazo iziliphu zobuhle. Funda isixhumanisi sokuqala. I-akhawunti esemthethweni ka-Sienna Miller Sienna inesithombe esisodwa kuphela, kepha kukhona amanye amaphrofayli ngokuphelele… Qhubeka ukufunda Izinkanyezi ezingama-20 ezingalokothi zibe nokuhluleka kobuhle
Umcamelo omuhle kakhulu wentwasahlobo
[ad_1] TOHUngakuthola kanjani okulula kakhulu nokuthi imuphi umkhuselo ohlanganisa ngaphansi kwemibuthano yamehlo nezinye izimpawu zokukhathala? Abaculi bezimonyo nama-blogger bakhuluma ngamathuluzi abawasebenzisayo emsebenzini nasempilweni. UVictoria Moiseeva Independent makeup artist, blogger Cushion Air Fit, A'pieu Ukuhamba kwama-cushons kuqale ngalolu hlobo, futhi okwamanje… Qhubeka ukufunda Umcamelo omuhle kakhulu wentwasahlobo
Izitayela ezingama-20 zemfashini ezinama-blondes
[ad_1] UVizazhist Evgenia Rusinovskaya utshele indlela yokuthola umthunzi ophelele we-lipstick, futhi wabelane ngemikhiqizo yakhe ayithandayo yama-blondes. I-Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Lapho ukhetha umbala we-lipstick, qhubeka kusuka kohlobo lombala (olufudumele noma olubandayo) kanye nomthunzi wezinwele. Imibala efudumele ifanele amantombazane ane-blond efudumele; abandayo, ngoba… Qhubeka ukufunda Izitayela ezingama-20 zemfashini ezinama-blondes
Izitayela zezinwele zika-Angelina Jolie ezihambisana nawo wonke umuntu
[ad_1] UBeautyHack ukhethe izitayela zezinwele ezilula neziguquguqukayo futhi wacela isitayela u-Anna Portkova ukuthi aphawule ngazo. Izinqwaba zika-Anna Portkova Trichologist-consultant, ivolumu ekhoneni, ukuhlukaniswa kwe-offset, izinwele ezibuyiselwe emuva, ama-bangs - Izitayela zika-Angelina zinamaqhinga alula kakhulu! Konke lokhu kungenziwa ekhaya, inqobo nje uma ninokufanayo… Qhubeka ukufunda Izitayela zezinwele zika-Angelina Jolie ezihambisana nawo wonke umuntu
I-sauna ye-infrared: izinzuzo nokulimala
[ad_1] VUngasebenzisa i-sauna ye-infrared esikhungweni sokuzivocavoca sesimanje noma endaweni yokubukisa - ithandwa kakhulu kubantu ababheka ubuhle nempilo. Amagagasi e-infrared anomphumela omuhle, ongena ngokujulile emzimbeni, uwafudumeze. Awukho umswakama edokodweni, okwandisa ukujuluka futhi kususe ubuthi… Qhubeka ukufunda I-sauna ye-infrared: izinzuzo nokulimala
4 ubuhle obusha bokuvakashela
[ad_1] Isikhala sobuhle sika-Ot, lapho wonke umuntu azi ngokunakekelwa kwesikhumba ebusweni, kuphrojekthi entsha yesitayela esiphezulu u-Yegor Ryabushko. I-The-Face-Only yasungulwa amantombazane amabili abematasa ngokweqile: umakhi wohlobo lweRasario iRasida Lakoba kanye nomsunguli weketanga le-Wax & Go salon uMaria Ginzburg. Banezingane eziyisikhombisa ezimbili. Ngakho-ke,… Qhubeka ukufunda 4 ubuhle obusha bokuvakashela
Ukukhazimula okulula: ukubuyekezwa kwemikhiqizo emihle kakhulu ekhanyayo
[ad_1] Abahleli be-RBeautyHack bahlola ama-eyeshadows amahle kakhulu, ama-highlighters, ama-powders kanye nama-glitters ngokukhanya okubucayi nokubenyezela okubonakala emkhathini. I-Highlighter Skin Love Glow Glaze Stick, i-Becca Choice yomhleli omkhulu we-BeautyHack Anastasia Speranskaya Ngo-Mashi, u-Becca wethule iqoqo elisha, i-Skin Love, okubandakanya imikhiqizo ebhalwe ukuthi i-eco-friendly. Iqukethe konke… Qhubeka ukufunda Ukukhazimula okulula: ukubuyekezwa kwemikhiqizo emihle kakhulu ekhanyayo
ngizame kanjani inqubo yeDermadrop
[ad_1] KANYE nomhleli omkhulu we-BeautyHack waya emtholampilo we-cosmetology entsha i-Gen87ukuhlola inqubo ye-Dermadrop. Ngubani efanelekayo futhi kungabhekwa njenge-analogue engenabuhlungu ye-biorevitalization? U-Anastasia Speranskaya Umhleli Omkhulu uBeautyHack Ilanga liyashisa, kuvunguza umoya, amabhethri ayoma - akusona sonke isikhumba esinga… Qhubeka ukufunda ngizame kanjani inqubo yeDermadrop
Izinketho ezingama-30 ze-manicure zalabo abangabuthandi ubuciko be-nail
[ad_1] Ingubo enombala ongezansi ikhathele, kepha awulungele ukudweba iSistine Chapel kuzinzipho zakho - ngabe kujwayelekile? I-BeautyHack iqoqe izinketho zobuciko bezipikili kubathandi be-minimalism futhi yatshelwa ukuthi iziphi izaluni eMoscow ezingaphindwa kuzo. Vele ubonise inkosi! Ungakwenza kuphi: Uhlobo Lwezobuhle salon… Qhubeka ukufunda Izinketho ezingama-30 ze-manicure zalabo abangabuthandi ubuciko be-nail
Ukuqoshwa kwezinwele: ubuhle nobubi
[ad_1] Ingabe ukudla kwakho kwansuku zonke kudla isikhathi? Yenze ihlale isikhathi eside ngokuqoshwa kwezinwele. Inqubo ilungisa ivolumu nama-curls kusetshenziswa ukwakheka okukhethekile, ama-styler noma ama-curlers. Imvume izohlala kusuka emasontweni amathathu kuya kwayisishiyagalombili! I-BeautyHack - mayelana nobuhle nobubi bokubaza izinwele. Kuyini ukubaza izinwele? Ukubaza ukudala… Qhubeka ukufunda Ukuqoshwa kwezinwele: ubuhle nobubi
Ungasusa kanjani umkhuhlane ngokushesha ezindebeni: weluleka udokotela wesikhumba
[ad_1] HL Ake siqale ngezindaba ezidumazayo: ngu-4% kuphela wabantu emhlabeni ongalithwali igciwane le-herpes. Futhi amathuba okuba ukhishwe, hhayi umthetho, mancane. Ngakho-ke, umbuzo wokususa umkhuhlane ezindebeni ungasebenza nganoma yisiphi isikhathi. UDermato-cosmetologist uViktoria Britko utshele kanjani… Qhubeka ukufunda Ungasusa kanjani umkhuhlane ngokushesha ezindebeni: weluleka udokotela wesikhumba
ukuthi ibukeka kanjani nokuthi ungayiphinda kuphi eMoscow
[ad_1] Ukuphrinta kokucwebezelayo, izithunzi ezikhanyayo zisetshenziswe ngamabomu ngokunganaki, ukuzihlikihla kanye nezinqunu zakudala ngezinto zemifanekiso - ama-manicurists embukisweni wemfashini basebenzise zonke izindlela ukunaka izinzipho zamamodeli. Konke lokhu kungaphindwa njengamanje kuma-salon aseMoscow - imibono namakheli awusizo kokuqukethwe kwe-BeautyHack! I-Scarlet shades Ku… Qhubeka ukufunda ukuthi ibukeka kanjani nokuthi ungayiphinda kuphi eMoscow
Imikhiqizo emi-5 yobuso engiyisebenzise ngokuphelele
[ad_1] Umhleli we-RBeautyHack uYulia Kozoliy - mayelana nokhilimu, izifihla-buso nama-emulsion ebusweni obufanelana naye kahle futhi, okungenani, ufanele ukunakwa nguwe. Ukhilimu wokuthambisa iBotanical Kinetics Hydrating Soft Crème, i-Aveda angiziboni ngingomunye wabalandeli abathembeke kakhulu bakwa-Aveda - akuyona yonke imikhiqizo engifanele, futhi eyami… Qhubeka ukufunda Imikhiqizo emi-5 yobuso engiyisebenzise ngokuphelele
konke ngokuhlinzwa kwepulasitiki eKorea
[ad_1] Odokotela abahlinzayo beplastiki be-TOOreian babhekwa njengabanolwazi kakhulu emhlabeni. Ngokwezibalo, owesifazane ngamunye wesihlanu wase-Asia uke wahlinzwa okungenani okukodwa kwezimonyo. Ukubeka i-aesthetics kulayini womhlangano, ongoti baseKorea benze amakhono abo athuthukisa, bahlonipha yonke iminyakazo. Kuze kube manje, iKorea yenze imisebenzi eminingi emhlabeni. Ezokuvakasha kwezokwelapha… Qhubeka ukufunda konke ngokuhlinzwa kwepulasitiki eKorea
Ungalunquma kanjani uhlobo lombala wakho futhi kuyadingeka?
[ad_1] I-TOcolourist kanye ne-make-up artist - ukuthi uhlobo lombala lunani elingakanani manje nokuthi kungani kungafanele uthembele ngokuphelele kulesi sici lapho ukhetha izimonyo noma ufuna ukushintsha umbala wezinwele zakho. UChristina Novikova umculi wezimonyo, umdali wesikole sokwenza izimonyo seNovikova Studio Manje ukwahlukaniswa kokubukeka ngokwezinhlobo zombala kubonakala… Qhubeka ukufunda Ungalunquma kanjani uhlobo lombala wakho futhi kuyadingeka?
Yiziphi ama-blogger akhuluma ngazo: Nastya Swan
[ad_1] I-Mdress ne-blogger uNastya Swan - mayelana nemikhuba yansuku zonke yobuhle, ukuzwana kwangaphakathi nawe, ukudla okunempilo nezemidlalo. Mayelana nempilo yengqondo Ukuze ukhiqize, kubaluleke kakhulu ukugcina ibhalansi, ibhalansi yangaphakathi futhi ugcine imicabango yakho ihlelekile. Imikhuba yokomoya, ukusebenza nodokotela wezengqondo nokuxhumana nengaphakathi lami kungisiza… Qhubeka ukufunda Yiziphi ama-blogger akhuluma ngazo: Nastya Swan
Abasakazi be-TV abahle kakhulu eminyakeni engama-11
[ad_1] U-Othey angakha kalula umsebenzi wokumodela hhayi kabi kunalowo kaCindy Crawford, kepha bakhetha isitudiyo sethelevishini kune-catwalk. U-Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze kanye nabasakazi be-TV abahle abayi-9 kule minyaka engama-20 edlule. U-Ekaterina Andreeva Uma ubheka uCatherine, kubonakala sengathi iphilisi lokuguga belisese… Qhubeka ukufunda Abasakazi be-TV abahle kakhulu eminyakeni engama-11
Imibukiso eyi-10 ehamba phambili ye-TV yaseBrazil yobuntwana bakho
[ad_1] V Ngo-1988, uchungechunge lokuqala lwe-TV yaseBrazil i- “Slave Izaura” lwakhonjiswa e-USSR. Indaba yothando ka-Izaura dos Santos noLeoncio Almeida yalandelwa yizwe lonke elikhulu. Ngasekuqaleni kweminyaka yama-80s, uSusana Vieira, uVera Fischer, u-Antonio Fagundes nabanye abalingisi abadumile baba “ngamalungu” cishe yonke imindeni… Qhubeka ukufunda Imibukiso eyi-10 ehamba phambili ye-TV yaseBrazil yobuntwana bakho
Imikhiqizo emi-5 yethoni engenaphutha kanye nokufana kwabo
[ad_1] U-RAnastasia Speranskaya, umhleli omkhulu we-BeautyHack, uhlolwe i-primer ebushelelezi, isisekelo esinomphumela ogqamile, i-highlighter efana negolide elimanzi, neminye imikhiqizo yesikhumba esifanele kunoma isiphi isabelomali. Primer Foundation for makeup Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent Khumbula umphumela obushelelezi kuhlelo lokusebenza oludumile lokuhlela isithombe? Ngalesi sisekelo ... Qhubeka ukufunda Imikhiqizo emi-5 yethoni engenaphutha kanye nokufana kwabo
amakha amahle kakhulu ngefomethi yosayizi wokuhamba
[ad_1] I-Arum, eyakhiwe ngokungafani okucacile phakathi kukaswidi kakotini kanye ne-patchouli, inhlaka elula kodwa ephumelelayo ene-viscous spruce resin kanye nethonsi lejusi lewolintshi namanye amakha okulungele ukuhamba nawo uma useholidini - bheka kukhetho olusha lwe- umgxeki wamakha uKsenia Golovanova. I-Eau de parfum Bergamote &… Qhubeka ukufunda amakha amahle kakhulu ngefomethi yosayizi wokuhamba
Amaski obuso angajwayelekile ayi-9
[ad_1] Abahleli be-BeautyHack bachitha usuku begqoke izifihla-buso zobuso ezihlekisa kakhulu, ezingavamile neze nezihehayo. Sitshela ngemibono yethu - ngubani oyidingayo futhi ngani? Isifihla-buso sezinto ezimbili zokuhlanza nokondla isikhumba i-Double Dare, i-OMG! Amaski waseKorea Double Dare OMG! Ama-Blogger ayayithanda - eyokupakisha okumangazayo nentokazi “enophawu”… Qhubeka ukufunda Amaski obuso angajwayelekile ayi-9
Amaphunga ayi-15 wonke umuntu aphupha ngawo
[ad_1] L Amakha amnandi kanye nezinto ezintsha zamakha ezikhethiwe, okuvela kuzo intwasahlobo emphefumulweni, kuseqoqweni elikhethekile le-BeautyHack. U-Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris AbaseFrance bathi: "Ukunikeza uKorloff ukuvuma uthando lwakho." Futhi akunandaba ukuthi kusho ukuthini, ucezu lobucwebe nokusakazeka kwe… Qhubeka ukufunda Amaphunga ayi-15 wonke umuntu aphupha ngawo
Siyakhuluma futhi siyabonisa: izinto ezintsha eziyi-15 zobuhle ngo-Ephreli
[ad_1] Siyakhuluma futhi siyabonisa: izinto ezintsha eziyi-15 zobuhle ngo-Ephreli [ad_2]
izinkanyezi ezazingama "crumpets" ebuntwaneni
[ad_1] V ebuntwaneni, lezi "pyshechki" ezidumile zavusa uthando phakathi kwabanye: o, lezo zihlathi ezibomvu. Sebekhulile, banquma ukuthi kwase kuyisikhathi sokususa "amafolda" futhi aphenduke onobuhle obuhle. Osaziwayo ababeyizidlakela ebuntwaneni babo - ekuhlanganisweni kweBeautyHack. UJennifer Goodwin Izilaleli zayithanda le cutie… Qhubeka ukufunda izinkanyezi ezazingama "crumpets" ebuntwaneni
Abesifazane abahle kakhulu kwezepolitiki
[ad_1] Kusuka kunkosikazi wokuqala waseMiddle East odumile kuya kusekela lesifazane elihle kakhulu eBrazil. Ku-athikili ye-BeautyHack - iNdlovukazi uRania, u-Ivanka, uMelania Trump nabanye besifazane abayi-12 abenza konke okuphelele. UMelania trump Engazi, uMelania waqala umsebenzi wakhe wezepolitiki ngo-2005, ngesikhathi eshada noDonald Trump. … Qhubeka ukufunda Abesifazane abahle kakhulu kwezepolitiki
Ungasifaka kanjani kahle amakha?
[ad_1] Umzila omnandi we-NSA ngeke ushiye abanye bengenandaba, futhi uzokunika ukuzethemba. Lapho usebenzisa i-eau de toilette, kufanele kukhunjulwe ukuthi umsindo nobude bephunga kubanjwa ndawonye ngezinto eziningi. Okuyinhloko ukusetshenziswa okulungile kwamakha ezingxenyeni zomzimba nezingubo. I-BeautyHack imayelana nokuthi… Qhubeka ukufunda Ungasifaka kanjani kahle amakha?
5 imikhiqizo yokwakha oyisebenzisayo engalungile
[ad_1] U-TOSenia Wagner wenza isivivinyo ku-logic yobuhle: abafundi abahle kakhulu - abahlanu, abafundi abahlulekayo - ukuphinda bakwenze! 1) i-BB cream Wena: yisebenzise esisekelweni njengethoni. Empeleni, lokhu akulona icala - futhi ngeke ujeziswe njengoRaskolnikov. Kombandela owodwa: uma isisekelo sijwayelekile… Qhubeka ukufunda 5 imikhiqizo yokwakha oyisebenzisayo engalungile
[ad_1] Ama-aleji, amakhemikhali asendlini nezinye izizathu ezingalindelekile zokuthi kungani izinzipho zikhipha. Ukuntuleka kwamavithamini Izimbangela zezipikili ezihlukanisiwe kungaba ngaphakathi nangaphandle. Umuthi wesundu ungowokushoda kwamavithamini nezinto ezincane: i-calcium, uvithamini D, i-phosphorus, i-silicon, i-iron. Ngokushoda kwabo, akuzona izinzipho kuphela ezihluphekayo, kepha nezinwele nesikhumba. Ku… Qhubeka ukufunda izizathu obungazi ngazo
Uwoyela obalulekile wePeppermint wezinwele ezinhle: uyasebenza ngempela?
[ad_1] AbakwaToolumnist uBeautyHack, umsunguli womkhiqizo wezimonyo zemvelo (@ natureal.ua) UVita Liasota utshele ukuthi kungani uwoyela wepepermint obalulekile ungezwa ezimonyo zezinwele nokuthi ngabe kuyasiza ngempela yini ukukhulisa ubhinca okhalweni. “Ekukhiqizeni izimonyo, sihlala sisebenzisa uwoyela obalulekile wepepermint - saze saba nesikhuhla esisekelwe kuso. It… Qhubeka ukufunda Uwoyela obalulekile wePeppermint wezinwele ezinhle: uyasebenza ngempela?
Ama-movie aphezulu wothando angama-5 wango-2019
[ad_1] NSANgemva kosuku olukhathazayo emsebenzini, ingabe ufuna ukuphumula kwi-melodrama noma ukukhipha imizwa yakho ngokubuka i-movie ephathelene nothando? Sikumema ukuba uzijwayeze ngokukhetha kwethu, okubandakanya izinto ezintsha ezihamba phambili zango-2019. Qala kwasekuqaleni Ifilimu ilingisa uJennifer Lopez othandekayo (funda… Qhubeka ukufunda Ama-movie aphezulu wothando angama-5 wango-2019
Izitayela zezinwele eziyi-18 zezinwele ezinde
[ad_1] Izisusa ze-VVictorian, izakhi ze-Gothic nenkululeko ephelele ekukhetheni izesekeli! Izinyanda eziyinkimbinkimbi Yilolu thando lwamaVictoria oluncane okulula ukuluhumushela ezinweleni ezinde. Uma ngezesekeli ezinkulu ungekho endleleni ngenxa yekhodi yokugqoka noma okuthandwa nguwe, ungazikhawulela ekungabonakali noma kumabhanti okunwebeka… Qhubeka ukufunda Izitayela zezinwele eziyi-18 zezinwele ezinde
Ikhasi 1 ... Ikhasi 44 Older okuthunyelwe